Qanannituu Abdi Germen Nationality Oromo Origin Victim of Ireechaa Massacre in Ethiopia.
Ireechii Bishooftuu bara 2016 yakka Duguga Sanyii Oromoo baleesuuf ta’ee jeedhame hojeetame dha.
Massacre at Irreechaa 2016 in Bishooftuu – War on Irreechaa celebrators.
Qanannituu Abdi October. 30/2016 Frankfurt Germany
Waga 10 ol ireechaa Oromoo biyya Europe hunda irrati argaman ture, Waliga’ii fi Hirira Oromoo biyya Europe tokko ilee hafee hin beeku. Ireechaa barana 2016 Bishooftuu irrati saba Oromoo guda waliin ayyanefachuuf kara fogo deeme Germeny irra dhaqee irrati argamee ilee gamachu ani barbada adeeme gaddati jijirame siirini wayyane rukkuta hama qama koo irran ga’een hanga yoona Hosptala biyya Germeny keessan ciiseen jira. Kun yakka ana qoofa irrati rawwatame miti yakka Oromoo Milliona 3 ol ta’uu achi irrati argame irrati dalagame dha yakka Oromoo Milliona 50 xiiqeesuuf, hamilee cabsuuf fi garbonfatan jirachisuuf itti yaadamee goodhame dha. Oromoo Siiran Milinilkin walka saba Oromootu dhumee, siira Haile silaseen ilee ajeefama fi xiiqeefama samama ture siirana dargi keessati ilee hayyuu Oromoo bayeetu dhumee siirna TPLF jalati yakki goodhama jiru amoo hunda siira habasha hunda caalaa hamadha siirana Atse Yohansi wal fakata jeeti Qanannituu Abdi.
Ajeechan Sukanessan, Qama hiirachuun fi madda gurgudan sukanessa fi midhan gurguda hamilee nama cabsuu nura ga’ee waan dafne fayyninu miti, Hosptala beekma Germeny keessati ji’a 1 yaalama jiradhuu ilee fayyan koo na hin deebine kun ji'a tokko ta'uuf guya 2tu na hafe. Guyyaa irreechaa akkuman rukkutamen barii isa gaaffaa 3 -10-2016 Germany hospital seene kanatu du’aa irra na barare malee utun Ethiopia turera ta’ee ani ilee akkuma froota koo biroon du’uu mala ture. Sadafii qawweetin na rukkutani, Lafee cinaachaa kan Bitaa hanga gadameesati na miidhani ergan kufees Namoon narra deemani Baayyee miidhamee ture Akka Waaqayyoofin Jira isaan akka du'uf ture, nuus TPLF Garaa gubnee diddaa Keenya fulduraati itti argiisisinee isheenis nuu fixuuti kaate, TPLF yakka kanati gaafatamuu qabdii. Kuni qabsoo dha yoo du'uyuu itti gaabbuu garuu isa Siree irraa ciisan dhukkubaan miidhamantuu namati ulfaataa innis Homa miti Ani borun fayyaa warri lubbu jijjiirraa hin qabne Guyyaa san wareegan keessaa ijjoolee Durbii kooti faati fi lammiin Oromoo akka baala harcaayeetuu hosptala keessati hirba na dhorkee na guguba jira, obsa na dhorke jira jeeti Qanannituu abdi.
Biyya Demokrasiin hin jire keessa mirga dhala nama hin egamuu kan jeete qanannituu Abdi biyya Germenti halkan xiyyaran, Babura fi Autobusin deeme Maganoota biyya Europe akka Brussels, Antwerp, Amsterdam, Paris, Copenhagen, Oslo, Stockholm fi kkf hunda bakka Oromoo waligaii, hirira naga, Irreechaa gegefatuu hunda irrati argaman ture guyya tokko rakkon na mudate hin beeku. Gaafan Germeny ka’ee Hollandi irra ba’ee gara Copenhagen fi Stockholm halkan walka booda qoofa koo biyya hin beekne keessa shanxa guda badhadhe adeema turetu jira garu bala tokko malen bakkan barbadu ga’ee , Sababan isaa biyya demokrasiin qaban waan ta’eef, garuu Ethiopia guyyan seene egalee waanin arga ture ama hosptala cisee dubachuuf humana isaa hin qabu guyya tokkon dubadha jeeti.
Goochan duguga sanyii baleesi Ireechaa Bishooftuu irrati rawwatame qooratoota adunyan qoortamuu qaba. Kun yakka salpha miti guyya tokkoti sa’aa 1 keessati lubu 700 oltuu badee, namoota kuma heedutu midhame, qama hirate, ijoole umuri ji’a 2 Maqa Mogasuamuuf achii dhufan, wara Cidha isaan kabajachuuf achi dhufan, Oromoo biyya ala fi biyya keessa kara dheera adeeman dhufan heedutu achii ture, nami achi jiruu keessa haraki 60% ol ijoole umuriin isaani waga 18 gadti, heedun isaa naannoo adda adda biyya fagoo irra dhufan teesooma lafa sana wara hin beekne dha. Mootumman ta’ee jeedhe garara goree kara qilee (washaati) Oromooti dhukasun ari’achun akka isaa boola fi bishanti naman dhuman goodhe. Mootumman yakkaman kun Oromoo Molliona 3 ol ta’uu bakka dhiphoo sun keessati bakka dhabatuu hin qabneti, xiyyaara fi meesha gugugudan dhukasun isaa Gasii ija nama busisuu fi lafa arguu nama dhorkuu irrati dukasun isaa umata Oromoo fixuuf ta’ee jeedhamee waan itti goophamee hojeetamee dha. Jeequmsa sun hundi akka dhalatuu mootummati qindeesa ture, abbooti gada darbee fi ogannota siyyasa waltajii ireechaa irra basuun ta’ee jeedhamee jeequmsa umuuf karoorfameeti.
Yakka kana booda Oromoo goocha kana mormee finciluun isaa haqa qabeessa, mormii umata kana mootumma hubatee furmata barbaduuf dhisee meesha amayya fayadame Oromoo ajeesuu itti fufun isaa gara jabina fi TPLF Oromoo fixuuf karoora qabachuu isaa argisisa. Goocha gutuma Oromiyaa keessati dalagama ture fi dalagama jiru mootumman kun saba biyyati obsa fi jalala kan hin qabne ta’uu isaa argisisa. Ilmoo ajeesee haadhan reefaa ilmoon ishee irra ka’ee reebun isaa gara jabina mootumma kanaf raga cimadha. Sababa tokko malee mana Oromoo cabsan samani qabeenya erga fudhatan booda maati gutuu ajeesan bakka adeemantu jira. Goochan akkasi biyya adunya kami iyuu keessati hin raawatamne.
Kun amoo utuu hin xinatiin Marshal law ykn State Emergency labsee saba mana keessati ugure saba adunya irra kute ajeesuu itti fufun isaa biyya kana facasuuf saganta ini qabuu argisisa. Oromiyaa fi Oromoo dura iyuu harka waraana keessa ture keessa jira, Mootumman abba hiree erga Ireechaa booda jeequmsa ka'een wal qabate kana base booda labsii kana da’oo goodhate lubuu 400 ol baleesee jira. Sabi adunya kana caalisee ilaaluu hin qabu. Mootummaa kana irrati qooqoba fi murte cimma irrati goochuu qaba ture. Yakki saba Oromoo iraati raawwate sirti qooratamuu qaba kan jeedhan miseensi paarlamaa Europe Prof. Dr. Klaus Buchner lammi Germany dhimma kana yakka saba adunya irrati raawwatame fi yakka demokrasii baleesuuf godhama jiru kana akka dura dhabatan yeeroo adda adda ibsa turan.
Oromoo fi Oromiyaa furmata dhuma isaan barbadan Bilisumma fi Walbummaa Oromiyaa labsachuun ala furmata birra hin qaban. Adunya irra degersi egan hin jiru, ykn Habasha waliin araramun jijirami dhufuu hin jiru.